YouTube TV အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2022 - အခမဲ့ - 9Apps
ဒေါင်းလုပ် APK（28.7MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် YouTube TV: Live TV & more
•ကေဘယ်ကြိုး - အခမဲ့ TV ။ သင်၏ဒေသခံအားကစားနှင့်သတင်းများအပါအ0င် ABC, CBS, FOX, NFL ကွန်ယက်, NFF, NFL ကွန်ယက်, ESPN, ESPN, HGTV, ESPN, HGTV, ESPN, HGTV, ESPN, HGTV, TNT နှင့်အခြားအရာများအပါအ0င်အဓိကထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ကေဘယ်ကွန်ယက်များကိုကြည့်ပါ။
•စောင့်ကြည့်ပါ သင်၏စမတ်ဖုန်း, တက်ဘလက်, ကွန်ပျူတာ, စမတ်တီဗီသို့မဟုတ်ဂိမ်း console နှင့် Google Chromecast, Roku Player & TV တို့မှတဆင့်သင်၏ကြီးမားသောမျက်နှာပြင်တွင်နှင့် Apple DVR တို့တွင် DVR သိုလှောင်မှုနေရာကန့်သတ်ချက်များမရှိပါ။ မှတ်တမ်းတစ်ခုစီကို9လသိမ်းထားလိမ့်မည်။
•6Youtube TV အကောင့်တစ်အိမ်ထောင်စုတစ်စုလျှင်အကောင့်များ။ လူတိုင်းကသူတို့ကိုယ်ပိုင် login, အကြံပြုချက်များနှင့်ဒီဗီဒီကိုရရှိသည်။ •ကတိကဝတ်, စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းမရှိပါ။ အချိန်မရွေးဖျက်သိမ်းပါ။ •ယနေ့သင်၏အခမဲ့ရုံးတင်စစ်ဆေးမှုကိုစတင်ပါ။
YouTube တီဗွီတွင်ကွန်ယက် 85 ခုတွင်သင်ထည့်နိုင်သည်။ , CBS, FOX, NBC, PBS နှင့် ပိုမို. အားကစား
SPORTS SPORTS SPORKS SPORKS SPORKS SPORKS SPORKS, ESPN2, ESPN2, ESPN2, ESPN2, ESPNEWS, ESPNEEWS, ESPNU, Youtube, MLB ကွန်ယက်, NBA TV, NBCSN, NFLNSN, NFLNSNONE, SEC Network, SEC ကွန်ယက်, SEF NAVENTER, BBC America, BBC America, BED, BED, BED, ဟာသဗဟို, ကြယ်တံခွန်, Courttv, Cozi TV, Dab, ဆယ်စုနှစ်များစွာ, ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု, Freeform, fx, fx, fx, fx, fx, fx, fx, fxx, fxx, fxx, fxx, fxx, fxx Geo တောရိုင်း, အောက်စီဂျင်, paramount network network, smithsonian Channelv, Tbs, TBS, TBS, TBS, TNT, TNT, TNT, TNT, TNT, TNT, TNT, TV1, TV1, TV1 ပိုမိုသိရှိရန်
ABC News Live, BBC World News, Cheddar, CNBC, CNBC World, MSNBC, NB CLX နှင့် Add
Disney Channel, Disney အငယ်တန်း, Disney June Xd, Nickelodeon XD, Nickelodeon, Nickelodeon, Nick Jr. , PBS ကလေးများ, Telemundo, Universo
HBO MAX ကဲ့သို့သောအားကစားနှင့်ပရီမီကွန်ယက်များသည် HBO MAX, Showtime နှင့် Starz တို့ဖြစ်သည်။ • 4k Plus သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ feature အသစ်များ add-on အသစ်များဖြစ်သည်။ 4K Plus နှင့်အတူရရှိနိုင်သည့်အကြောင်းအရာများအပေါ်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဗွီဒီယိုအရည်အသွေးကိုရယူပါ။ Recordies အော့ဖ်လိုင်းကြည့်ရှုပါ။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက ကျေးဇူးပြု. ကျွန်ုပ်တို့၏အကူအညီစင်တာကိုကြည့်ပါ။
0 န်ဆောင်မှုသတ်မှတ်ချက်များ - tv.youtube.com/tv/terms
0 န်ဆောင်မှုသတ်မှတ်ချက်များ - TV.YOUTUBE.com/taidperters
privacy မူဝါဒ - TV.YOTUBE.com/tv/privacy
ကေဘယ် Cable-free Live TV ကိုယခုခံစားပါ။
ဘာအသစ်လဲ YouTube TV: Live TV & more 5.46.1
Morisika - মৰীচিকা | 18th May 2022 | Episode No 75
Moe yan My mnar